ကလေးမွေးပြီးနောက် လိင်မှုဘဝပြန်တည်ဆောက်ဖို့ ဘယ်အချိန်ကအကောင်းဆုံးလဲ - Hello Sayarwon
ကလေးမွေးပြီး လိင်ဆက်ဆံမှုဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်နေကျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးအမေတွေ အတွက်တော့ ဒါဟာ နောက်ဆုံးမှာ ထားရမယ့်အရာဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကလေးမွေးပြီး လိင်မှုဘဝကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ဖို့ အကြံဉာဏ်တွေ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြံဉာဏ်တွေကို လိုက်နာပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ပါ။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ သင်ရော သင့်ချစ်သူရော စိတ်ရောကိုယ်ပါ အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်ကို စောင့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကိုပိတ်စေပြီး သွေးထွက်တိတ်စေကာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြန်ဝင်လာစေဖို့ အချိန်ပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကွာခြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တွေက ကလေးမွေးပြီး အနည်းဆုံး လေးပတ်လောက် စောင့်ဆိုင်းသင့်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
အချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ ကလေးမွေးပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပေမယ့် အချို့ကတော့ အနည်းဆုံး ခြောက်ပတ်အထိ စောင့်ဆိုင်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီး သုံးလကြာတော့မှ စုံတွဲအတော်များများက လိင်ဆက်ဆံကြပါတယ်။ စုံတွဲအနည်းငယ်ကတော့ နှစ်ဝက်လောက်ကြာမှ လိင်ဆက်ဆံကြပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် လုပ်လိုက်ပါ။ ပြဿနာတွေ ရှိနေသေးရင်တော့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကလေးမွေးပြီး စတင် လိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်တားဖို့ကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကလေးရမသွားခင် တားဖို့ စဉ်းစားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကွန်ဒုံးသုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့် အချိန်အတော်ကြာအောင် ကိုယ်ဝန်တားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကော့ပါး သားအိမ်တွင်းထည့် ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူက လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကတော့ မဆက်ဆံချင်သေးပါဘူး။
တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူက သင်လိင်မဆက်ဆံလိုစိတ်မရှိသေးခင်မှာ လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သင့်ချစ်သူနဲ့ စကားပြောပြီး ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာနဲ့ ကလေးမွေးပြီး ဘာတွေဖြတ်ကျော်ရမယ်ဆိုတာကို သူသိအောင်လုပ်ပါ။ ရင်းနှီးမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ပြောဖို့နဲ့ နားလည်မှုရှိဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူက သင်အဆင်သင့်မဖြစ်ခင်မှာ လိင်ဆက်ဆံချင်ခဲ့ရင် သူဟာ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ သင်ဟာ ကလေးကိုအလေးပေးချင်လို့ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ကိုချစ်ဆဲပဲဆိုတာကို သူသိအောင်လုပ်ပါ။
လိင်ဆက်ဆံမှုမပါပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသနည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ညအိပ်အနမ်း (သို့) ခွဲခွာချိန် အနမ်းတွေဟာ အကျိုးရှိပါတယ်။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ စကားတွေကို ကြားချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်း သူသိဖို့ လိုပါတယ်။
သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ ဝေမျှခြင်းနဲ့ ဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဒါတွေကို အတူကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ ပတ်သက်သော အချက်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ အတော်များများဟာ အချိန်တစ်နှစ်တာ အတွင်းမှာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းတွေကို အခြေအနေတိုးတက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
• ဖြည်းညင်းစွာ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အထိအတွေ့တွေကို သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
• လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာ သင်ကြိုက်တဲ့အရာရော၊ သင်မကြိုက်တဲ့အရာပါ သင့်ချစ်သူကို ပြောပြပါ။
• ထိုးသွင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို အရင်မစတင်ပါနဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သာယာမှုကို အရင်ရအောင်ယူပါ။ ဒါက ပိုလွယ်ကူပါတယ်။
• ကျန်းမာတဲ့အစားအသောက်ကို စားပါ။ အရည် အမြောက်အမြား သောက်ပါ။
• တတ်နိုင်သမျှ အနားယူပါ။
• သင့်ကိုယ်ခန္ဓါကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကိုယ်ခန္ဓါ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ပါ။
ကလေးမွေးပြီး လိင်မှုဘဝကို ပြန်လည်စတင်ရတာဟာ အချိန်ကြာပါတယ်။ စိတ်မရှည်မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ လိုက်နာမယ်ဆိုရင် အရာရာ အဆင်ပြေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းနဲ့ သင့်ဘဝရဲ့ ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကို သာယာပျော်ရွှင်နေခြင်းဟာ သင့်ကို အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်စေမှာပါ။
Sex after the birth. http://www.babycentre.co.uk/a536362/sex-after-the-birth. Accessed 07 September, 2016.
Let’s talk about sex: After the baby. http://www.babycenter.com/0_lets-talk-about-sex-after-the-baby_11802.bc?page=3. Accessed 07 September, 2016.
Labor and delivery, postpartum care. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/sex-after-pregnancy/art-20045669?pg=2. Accessed 07 September, 2016.
Sex after havingababy. https://www.nct.org.uk/parenting/sex-after-having-baby. Accessed 07 September, 2016.
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အတွက် လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် မြင့်တက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ